HORREEYA laser XIRFADLAYAAL FARSAMO TAAGEERADA
Si loo hubiyo adeegyada la dhaafin oo kaamil ah, aan ma aha oo kaliya ay leeyihiin kaamil ah pre-sale, iibka, iyo ka dib-iibka nidaamka adeegga, waxaan sidoo kale u qabtaan maamulka hoose meelaha soo socda:
1. Shaqaale kasta oo adeegga iibka ka dib ah ee leyshka dahabka ah wuxuu leeyahay shahaado kulliyad ama wixii ka sareeya, oo shaqaale kasta oo iibka iibka ka dib wuxuu maray tababar gudaha ah oo muddada dheer ah wuxuuna ka gudbay nidaamkeena qiimeynta teknolojiyadda ka hor inta aan la xaqiijin inay shaqeyso.
Marka saddexaad, Maareynta dhaqanka adeegga caadiga ah
1. Shirkadda waxay sameysay lambar mideysan oo anshaxeed iyo cabbir qiimeyn ah si loo hubiyo in howlaha adeegga ay yihiin kuwo jaangooyey iyo habraaca adeegga iyo adeegyadu si xirfad leh u habeysan yihiin Tayada adeegyada ay sababaan kala duwanaanshaha shaqsiyadeed waa la yareeyaa lagana fogaadaa.
Marka afaraad, Maareynta macluumaadka kanaalka Qaanuunnada
1. Macaamiisha ayaa nagala soo xiriiri kara khadadka kala duwan sida taleefanka, fakis, warqad, emayl, iyo fariin degel.
In si wanaagsan ugu adeegaan dhammaan dadka isticmaala, oo dadka isticmaala ay maal-soo saarka qalabka laser ammaan iyo welwel la'aan ah, laser oo dahab ah siin doonaa dadka isticmaala wanaag adeeg-iibka ka dib.
U Baahan Adeeg Kadib Kadib Hada!
Fadlan bixi taxanaha Mashiinka markii aad noo soo dirto emaylka Adeegga Kadib!